ကြည့်မြင်နိုင်ကမ်းနားကို ဖြစ်နိုင်လျှင်သွားပြီးလေညှင်းမခံပါနဲ့ ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ကြည့်မြင်နိုင်ကမ်းနားကို ဖြစ်နိုင်လျှင်သွားပြီးလေညှင်းမခံပါနဲ့ ။
ကြည့်မြင်နိုင်ကမ်းနားကို ဖြစ်နိုင်လျှင်သွားပြီးလေညှင်းမခံပါနဲ့ ။
Posted by etone on Nov 2, 2010 in Other - Non Channelized |0comments
ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ကမ္းနားကို ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္သြားျပီးေလညွင္းမခံပါနဲ႕ ။
ဒီတခါပြောပြမဲ့အဖြစ်ပျက်လေးက ဇွန်လ ၈ရက်နေ့က ဖြစ်ခဲ့တာပါ ။နေရာကတော့ ကြည့်မြင်တိုင်ကမ်းနားလမ်းမှာပေါ့ … ။ အချိန်ကတော့ ည၈နာရီဝန်းကျင်ပါ … ။
ကမ်းနားလမ်းပေါ်၊ ညဈေးမှတ်တိုင်အနီးက ငှက်ပျောတန်းဆိပ်နဲ့ နီးတဲ့ ကမ်းပါးကလေးကတော့ ညနေတိုင်းလိုလို အတွဲတွေ၊ ကလေးတွေ၊ စွန်လွှတ်သူတွေ ၊ လူလတ်ပိုင်းတွေလမ်းလျှောက်သူတွေနဲ့ စည်ကားနေပါတယ် ။ ညနေ နေဝင်သွားတာကို ကမ်းပါးကနေ ထိုင်ပြီးကြည့်ရတာ အရသာတစ်မျိုးပါ ။ လေလေးဖြူးဖြူးနဲ့ တော်တော်လေးကို သာယာတဲ့နေရာမျိုးပါ တနေ့တာ အမောပမ်းတွေက လေပြေလေးနဲ့အတူလွင့်ပါးသလိုလိုပါပဲ ။ ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ကလေးများ ဘေးမှာမရောက်လာရင်ပဲ အဲ့ဒီညနေလေးက အတော်သာယာပါတယ် ။ အရင်ကဆိုရင် ရုံးဆင်လို့အိမ်ပြန်ရင်အိမ်တန်းမပြန်ပဲ အဲ့ဒီမှာ ထိုင်ပြီး လေညှင်းခံပါတယ် ဝယ်သွားတဲ့မုန့်တွေထိုင်စားတယ်ပေါ့ သူများအတွဲတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာလည်း မသိမသာ ရှိုးတယ်ပေါ့ ။ တခါတခါသူများတွေကို လိုက်ကြည့်နေမိရင်း ဘေးကချစ်သူ စိတ်ကောက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ညနေလည်း မှောင်ရီပျိုးတော့မှ ပြန်လာတာပါ ။ ညဉ့်နက်တဲ့အထိတော့မထိုင်တတ်ပါဘူး …အဲ့ဒီမှာက ကုန်ထမ်းတဲ့လူတွေလည်း ရှိနေတော့ နေဝင်ချိန်ကျော်ရင် သူတို့က မူးပြီး ရမ်းတတ်တာမျိုးရှိလို့ပါ ။
ဇွန်လရဲ့ ဒုတိယအပတ်ညနေခင်းလေးမှာတော့ အရင်နေ့ကလို ရုံးကပြန်တာနဲ့တန်းမသွားတော့ပဲ သွားစရာလေးအရင်သွားပြီးအပြန်မှ ကမ်းနားမှာထိုင်ဖြစ်ပါတယ် ။ အရင်ထက်တစ်နာရီလောက်ပိုနောက်ကျနေမှန်း သိပေမဲ့ ထိုင်နေကြဆိုတော့ ဒီအချိန်လောက်ပြသနာမရှိဘူးပေါ့… ။ ကမ်းနားမှာထိုင်စားဖို့ ကြက်ကြော်လေးဝယ်ပြီး စာရွက်လေးတွေခင်းထိုင်လိုက်ပါတယ် ။ အဲ ထိုင်ပြီးမှ ဘေးဘီဝဲယာကြည့်တော့ လူတွေရှင်းနေပါတယ် ။ အတွဲတစ်တွဲနဲ့ လူနှစ်ယောက်ခွက်ပုံးကစ်နေတဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲ ထိုင်နေပါတယ် ။ လူတွေမလာဖြစ်လို့ပဲအထင်နဲ့ ဆက်ထိုင်နေမိပါတယ် ။ လေလေးကလည်း တိုက်လိုက်ကြက်ကြော်လေးစားလိုက်ပေါ့လေ ။ ထိုအချိန်မှာ ဒရိမ်းဒရိုင်နဲ့ လူနှစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာပါတယ် အီးတုံးတို့ဘက်ကိုပေါ့ ။ ဘေးက ချစ်သူကလည်း အန္တရာယ်တစ်ခုခု ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက် အသင့်အနေထားနဲ့ လာနေတဲ့အရက်မူးသူနှစ်ယောက်ကို အကဲခတ်နေပါတယ် ။ အနားရောက်တော့ သူတို့ခြေလှမ်းတွေရပ်သွားပါတယ် ။ ချစ်သူကလည်း တစ်ခုခုဖြစ်ရင် လက်ဦးမှူရအောင် အသင့်စောင့်နေချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ဘာမှစမလုပ်ပဲ ပြသနာမရှာပါဘူး ။
ကိုယ့်နှလုံးခုံသံ ကိုယ်ကြားနေရပါတယ် … တစ်ခုခု မကြာခင်မှာဖြစ်တော့မဲ့ပုံပါ … ။ အရက်သမားတယောက်က အတော်မူးနေပြီး လက်ထဲမှာ ပုလင်းကွဲတစ်ခုကိုင်ထားပါတယ် သောက်ပြီးသားအရက်ပုလင်းကို ကမ်းနားက ဘောင်နဲ့ ရိုက်ခွဲခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ ။ အနားရောက်တော့ မတ်တပ်ရပ်အနေထားနဲ့ အီးတုန်းတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာကို ခါးကိုင်းပြီးတီးတိုးပြောပါတယ် ။ ဒီနေရာကအမြန်ထွက်သွားတော့တဲ့ …. ပြသနာဖြစ်နေတယ်တဲ့ ။ အီးတုန်းလည်း စပ်စုတဲ့ စိတ်က ထိန်းမရတော့ ဘာပြသနာလဲ၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲပြန်မေးတာပေါ့ …… အမူးသမားထဲက တယောက်က တော်တော်မူးနေတဲ့လူကို ဆက်ခနဲခါးဆွဲဆန့်လိုက်ပြီး လာရာလမ်းအတိုင်း ဒရိမ်းဒရိုင်နဲ့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ် ။ အီးတုံး အမေးကိုတောင် ပြန်မဖြေသွားခဲ့ဘူး ။ စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျနဲ့ ဒီနေ့ဘာလို့လူတွေရှင်းနေရလည်း သံသယတော့ဖြစ်မိပါတယ် ။ ဒီနေ့မတိုင်ခင် နှစ်ပတ်လောက်ကလည်း ကမ်းနားမှာ အလောင်းလာပေါ်နေပါတယ် ။ …. မှောင်နေလို့မသိပဲ သူများပြောတော့မှ သေချာကြည့်မိတော့အလောင်းကောင်ဖြစ်မှန်းသိတာပါ ။…ကဲပါ ဒါက သတ်သတ်ပါ ။ အခုက လူတွေတိတ်နေတာထူးဆန်းတယ် ။ ဟိုအရက်မူးသမားများ ဒီကမ်းပါးမှာ လူသတ်ထားလား။ လုယက်မှူတွေဖြစ်ပေါ် နေလား ။ ချိန်းပြီးရန်ဖြစ်ပွဲတွေများဖြစ်နေပြီလား အရမ်းကိုစိုးရိမ်သွားတယ် ။ ဘေးဘက်က ခွက်ပုန်းကစ်နေတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကိုကြည့်တော့ ဘယ်အချိန်က ပြန်ထသွားမှန်း မသိပါဘူး… ။ နောက်အတွဲ တစ်တွဲကလည်း ကိုယ်တွေနဲ့လှမ်းပါတယ် အမူးသမားလာရာလမ်းကြောင်းနဲ့ အီးတုန်းတို့ ထိုင်နေတာနဲ့ ပိုနီးပါတယ် ။ ဒါနဲ့ပဲ စားလက်စ ကြက်ကြော်တောင်မကုန်သေးပဲနဲ့ ချစ်သူကိုခေါ်ပြီး ထိုင်ရာမှထကာ ကမ်းနား အထွက်လမ်း( ရတနာပုံလမ်းအောက်ထိပ်အဝင်ဝ)သို့လျှောက်ခဲ့ပါတယ် ။ ကမ်းနားကနေ ဝင်ပေါက်လျှောက်လမ်းကို ရောက်ဖို့ ကာထားတဲ့ သွပ်ပြားတွေကို ကိုင်ပြီး လှမ်းကျော်ရပါတယ် ။ သွပ်ပြားတွေကို ကျော်နေတုုံး ဘယ်ကမှန်းမသိ ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့အသံတွေ ဆူညံလာပါတော့တယ် ။လူကိုတော့မထိပါဘူး တစ်ချိန်လုံးပေါက်နေတာပါပဲ ။ ထိသာထိရင်မလွယ်ပါဘူး ခဲက အုတ်ခဲထက်ပိုင်းဝက်လောက်ရှိပါတယ် ။ သွပ်ပြားတွေကိုကျော်ပြီး အပြင် ကမ်းနားလမ်းပေါ်တက်မဲ့ လျှောက်လမ်းရောက်တော့ ခုနက ငမူးနှစ်ကောင် နောက်ကနေ အော်ဆဲသံကြားပါတယ် ။ ကိုယ်ကတော့ မကြားသလိုပဲနေလိုက်ပါတယ် ။ ခုနကတည်းက သွေးပူနေတဲ့ ချစ်သူက ဘယ်ကနေဆဲနေလဲပြန်လှည့်ကြည့်ပါတယ် ။
ဆိုးဆိုးရွားရွားဆဲသံတွေဆက်တိုက်ကြားပြီးနောက် ငမူးနှစ်ကောင်ဆီသူသွားမယ်အလုပ်မှာ ချစ်သူလက်ကို အတင်း ဆွဲပြီးပြန်ဖို့လမ်းကြောင်းအတိုင်းခပ်သုပ်သုပ်လျှောက်လာခဲ့တယ် ။ ကမ်းနားလမ်းအပေါ်ရောက်လုခါနီးမှာ ကင်းတဲတစ်ခုရှိပါတယ် ဂိတ်အဝင်အထွက်ကားတွေစစ်တဲ့နေရာပါ … ဂိတ်မှအရပ်ဝတ်နဲ့ လူတယောက် ပလက်ကုလားထိုင်နဲ့ ထိုင်နေတာတွေ့ပါတယ် ။ အီးတုံးခေါင်းကို ပြင်ထန်တဲ့အရာတစ်ခု ထိမှန်သံကြားပြီး ထိုအရာက ခေါင်းကိုရိုက်ကာ နောက်ကျောပေါ်မှတဆင့် မြေပြင်သို့ပြန်ကျသံကြားလိုက်ရတယ် ။ လှည့်ကြည့်တော့ လူတယောက်(ခုနက ငမူးထဲက တစ်ကောင်ပါ) ပန်းထည့်သော ထင်းရူးသေတ္တာနှင့်နောက်မှပေါက်က ထွက်ပြေးသွားတာပါ ။ ချစ်သူက စိတ်တိုတိုနဲ့ငမူးနောက်ကို ပြေးလိုက်မယ်အလုပ်မှာ အီးတုံးက လက်အတင်းဆွဲထားလိုက်ရပါတယ် ။ သူတို့ဝင်ပြေးသွားတာ ကမ်းနားက မှောင်တဲ့ဘက်ဆိုတော့ မပေးလိုက်ခိုင်းတော့ဘူး ။ အမှောင်ရောက်မှ အုပ်စုလိုက်ဗျင်းရင် အီးတုံးရဲ့ အသည်းကျော်လေး အထိနာမှာပေါ့ ။ အမူးသမားက အခုလိုကြတော့လည်းမြန်လိုက်တာမာရသွန် အပြေးသမားလားအောက်မေ့ရတယ် ဖိနပ်တောင် ကျန်ခဲ့ပါတယ် ။ ခုနကတော့ပူထူနေလို့မသိသာပေမဲ့ ခေါင်းက သွေးတွေ အကျီင်္ကော်လာအထိစီးကျလာတော့မှ ခေါင်းကွဲသွားပါလားသိတော့တယ် ။ ခုနက အခင်းဖြစ်တဲ့ဂိတ်မှာခဏထိုင်ပြီး သွေးတိတ်အောင်အရင်လုပ်နေချိန်မှာ ချစ်သူက ရဲစခန်းကိုဖုန်းခေါ်ပါတယ် ။ အီးတုံးတို့ သွပ်ပြားပေါ်က ကျော်တဲ့နေရာမှာ အခြားလူနှစ်ယောက်လည်း သွေးရဲရဲသံရဲရဲနဲ့ ပြေးထွက်လာတာကိုမြင်ရပါတယ် ။ ခေါင်းနဲ့ဗိုက်မှာသွေးတွေချည်း နီတွတ်နေပါတယ် ။ သေချာတာကတော့ သူတို့အခြေနေက အီးတုံးတို့ထက်ပိုများပါတယ် ။ နောက်မှသိရတာ သူတို့ဆီက ပိုက်ဆံလုတာပါတဲ့ ခုနက ငမူးတွေပြေးရင် ရိပ်ခါဖြည့်သွားပုံရပါတယ် ။ ဖုန်းဆက်ထားတာကြောင့်နယ်ထဲ တစ်ယောက် သုံးမိနစ်အတွင်းအရောက်လာပြီး နောက် မိနစ်ပိုင်းမှာ တခြားရဲနှစ်ယောက် ထပ်ရောက်လာကာ လူစုခွဲပြီး ကမ်းနားကိုဝိုင်းပါတယ် ။ ဆိပ်ကမ်းရဲကိုလည်း အကြောင်းကြားပြီး ပိတ်ဆို့မှူပြုလုပ်ကာရှာပါတယ် ။ သို့သော်လည်း အမူးသမားနှစ်ကောင်မတွေ့တော့ပါဘူး ။ အီးတုံးက အမူးသမားကို စကားပြောလိုက်တဲ့အတွက် သူ့မျက်နှာကို အနည်းငယ်မှတ်မိနေပါတယ် ။ … အီးတုံးတို့လည်း လိုအပ်တဲ့ အရေးပေါ်ကုသမှူတွေ၊တိုင်တန်းမှူတွေ ပြုလုပ်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ။ ည ဆယ့်တစ်နာရီလေးဆယ်ကျော်မှာ ရဲစခန်းက ဖုန်းခေါ်ပါတယ် ထိုနှစ်ကောင်မိထားသည် ဟုတ်မဟုတ်လာကြည့်ပါဆိုတာနဲ့ နောက်နေ့မနက်သွားကြည့်တော့ သေချာသလောက်ဖြစ်နေပါတယ် ။ အခုတော့လည်း ရဲစခန်းက တာဝန်ရှိသူတွေ လိုအပ်သလိုအရေးယူပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။
ခေါင်းကဒဏ်ရာလေးကတော့ သွေးတွေအများကြီးထွက်လို့ ချစ်သူက မနာအောင် ချုပ်ပေးမယ်ပြောပေမဲ့ အီးတုံးဒီအတိုင်းထားဆေးထည့်ခဲ့တာ တစ်ပတ်လောက်မှာ ကျက်သွားပြီး နောက်တလလောက်မှာ အရှင်း ပျောက်သွားခဲ့ပါပြီ ။ ဒဏ်ရာလေးကတော့ အခုထက်ထိကျန်စဲပါ….. ။ ချစ်သူက နောက်ကျော အနည်းငယ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တဲအခါ အားလုံးအဆင်ပြေပါသတဲ့ ။
အားလုံးကိုပဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်လျှင်မသွားပါနဲ့ အဲ့ဒီနေရာကို ။ ဘာမှအာမခံချက်မရှိတဲ့နေရာပါလို့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်ပျက်လေးနဲ့ ယှဉ်ပြီးပြောပါရစေ ။ အခုလည်း မသိသေးတဲ့လူတွေသွားထိုင်နေတုန်းပါ ။ ဘယ်အချိန်ဘယ် ပြသနာဖြစ်မယ် မသိသေးလို့ ထိုင်ကြတာပါ … ။ လူရမ်းကားတွေကလည်း ရှိနေပါသေးတယ် ။
အီးတုံးခေါင်းပေါက်ပြီးနောက်မှာ အဲ့ဒီ ကမ်းနားကို ယောင်လို့တောင်ခြေမချတော့ပါဘူး။ တစ်ချိန်က နေဝင်ဆည်းဆာ လေးကို ဘယ်လောက်ပဲမက်မောမက်မော အိပ်မက်ထဲမှာတောင်ယောင်ပြီး ထိုကမ်းနားမှာမသွားတော့ပါဘူး ။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာလို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ် ။